၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်း- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရှည်လျားတဲ့တရားခွင် - ข่าวสด
၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်း- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရှည်လျ...
၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်း- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရှည်လျားတဲ့တရားခွင်
21 ก.ย. 2564 - 00:00 น.
နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေပါတဲ့ အမှု (၁၀) မှုနဲ့ တရားစွဲခံထားရပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာ စွဲထားတဲ့ နောက်ဆုံးတစ်မှုက အမှုနံပါတ်ထွက်လာရင် စုစုပေါင်း ၁၁ မှုအထိ ရှိလာမှာပါ။
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုံးချိန်းတွေကို ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၃ ကမှ ပြန်စခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ နှစ်လကျော်ကြာ အပြင်မထွက်ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဲဒီပြန်စတဲ့ရုံးချိန်းနေ့မှာ သူ့ကို ခေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းမှာ ကားမူးတဲ့ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရပြီး ရုံးတော်ကိုရောက်လာပြီးမှ ပြန်သွားခဲ့လို့ ရုံးချိန်းပြန်စတဲ့ရက်မှာပဲ သူ့ကျန်းမာရေးကြောင့် လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်ကောင်စီက စွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ထောင် ၈၇ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့ အမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမှုအခြေအနေတွေနဲ့ ဥပဒေကြောင်းချင်းရာတွေကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစွဲထားတဲ့ပုဒ်မတွေထဲ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေပါဝင်သလို နှစ်အနည်းငယ်သာချမှတ်နိုင်တဲ့ပုဒ်မတွေလည်းပါပါတယ်။
အာဏာသိမ်းတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က မြနန်းဘုံသာလမ်းနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရာမှာ တရားမဝင်စကားပြောစက် (၁၀)လုံး နဲ့ Jammer တစ်စုံ တွေ့လို့ ဆိုပြီး ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ စွဲဆိုတာဟာ ပထမဆုံးအမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုဒ်မနဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်သာချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်အနည်းဆုံးအမှုပါ။
ဒါပေမဲ့ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီဘက်က ပထမဆုံး ဒီအမှုတပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်လို့ အရေးပါတဲ့အမှုတစ်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားပြောစက်တွေတွေ့တဲ့ အမှုနဲ့ပဲ မတ်လမှာ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေနဲ့ တရားထပ်စွဲပါတယ်။ အကြောင်းအရာချင်းတူပေမယ့် ဒီပုဒ်မကတော့ ထောင် ၃ နှစ်ချလို့ရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အကြောင်းအရာတူ၊ တရားလိုတူ၊ စွပ်စွဲခံရသူ တူတဲ့အမှုမျိုးကို နှစ်မှုစွဲလို့မရဘူး လို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေက ထောက်ပြပါတယ်။
‘ဟိုတစ်မှုကမသေချာလို့ သေချာအောင် နောက်တစ်မှုထပ်ကပ်တဲ့သဘော’ လို့ ဥပဒေလေ့လာသူတစ်ဦးက သုံးသပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ စည်းရုံးရေးကိစ္စ နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ နှစ်မှု ထပ်တပ်ပါတယ်။
မနှစ်က စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်က စည်းရုံးရေးယာဉ်တန်းကို လက်ပြလို့ဆိုပြီး တစ်မှု စွဲပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွှေကြာပင် ရပ်ကွက်ထဲ တစ်အိမ်တက်ဆင်း မဲဆွယ်လို့ဆိုပြီး ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ ပဲ ထပ်စွဲပါတယ်။ အဲဒီအမှုကိုတော့ နေပြည်တော်က ဒေသခံတစ်ဦးက တရားလိုလုပ်ပြီးစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုတွေမှာ တစ်မှုကို ၃ နှစ်စီချလို့ရတဲ့ ပုဒ်မတွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်မှုကတော့ သမ္မတနဲ့ပူးတွဲ စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) အမှုပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့နဲ့ ပူးတွဲစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ စာနှစ်စောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး စွဲဆိုထားတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေကို အွန်လိုင်းကနေပဲတစ်ဆင့် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး မေလ ၂၄ ရက်မှာမှ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းထဲက ခြံနံပါတ် (၁) သီးသန့်တရားရုံးမှာ လူကိုယ်တိုင် ရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီရုံးချိန်းကို စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ရုပ်သံတွေက ထုတ်လွှင့်ခဲ့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အာဏာသိမ်းပြီး လေးလ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က သူ့ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် လူချင်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ တစ်ပတ်ကို ၂ ရက်စီ ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ဒီရုံးချိန်းတွေက ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရှေ့နေတွေကတဆင့် ပြည်သူလူထုကို သတင်းစကားပါးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
‘ပြည်သူတွေရှိနေသရွေ့ပါတီရှိနေမယ်’ ၊ ‘ကိုဗစ်အတွက်စိုးရိမ်မိတယ်’ ပြောတာတွေက အထင်ကရစကားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော်မှာ စွဲထားတဲ့ အမှု ၅ မှုကို ရက်ပေါင်း(၁၈၀)အတွင်း အပြီးစစ်ဆေးမယ်လို့ ရုံးတော်ကကြေညာပါတယ်။
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုံးချိန်းတွေကိုရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ရတာပါ။ အမှုတစ်မှုကိုမှ အမိန့်ချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဒီအမှုတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲချက်တင်ရန်မသင့်တဲ့အကြောင်း ရုံးတော်မှာ လျှောက်လဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။
စကားပြောစက်တွေဟာ လုံခြုံရေးတွေ ကိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မဆိုင်တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကြည်ဝင်းက ရုံးတော်မှာလျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု နှစ်မှုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကိုဗစ် စည်းမျဉ်းတွေကိုအပြည့်အဝ လိုက်နာခဲ့တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေက ရုံးတော်မှာ လျှောက်လဲခဲ့ကြပါတယ်။
ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) အမှု ဆိုရင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၃ ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကတည်းက ထိန်းသိမ်းထားလို့ ဒီအမှုဟာ စွဲချက်တင်ရန်မသင့်ဘူးလို့ ရှေ့နေတွေက ရုံးတော်မှာ ခုခံခဲ့ကြပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာစွဲဆိုထားတဲ့ အမှု(၅) မှုကတော့ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိပဲ ချနိုင်တဲ့အမှုတွေပါ။
ပထမတစ်မှုကတော့ ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ နဲ့ စွဲထားတဲ့အမှုပါ။
ဒီအမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေး သြစတြေးလျနိုင်ငံသား မစ္စတာ ရှောင်တာနယ် လည်းပါဝင်ပြီး နိုင်ငံခြားသားပါဝင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ရှောင်တာနယ်ရဲ့ လက်(ပ်)တော့ နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ စွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ကို ရှေ့နေတွေဆီကတောင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပြန်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဥပဒေဟာ ရန်သူနိုင်ငံတွေ ရှိတဲ့ကာလက ပြဌာန်းခဲ့တာမို့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရန်သူနိုင်ငံမရှိတဲ့အချက်ကို ကိုးကားပြီး ရှေ့နေတွေက ခုခံလျှောက်လဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
‘တကယ်တော့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ကိစ္စတွေပါ။ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်တွေမဟုတ်ဘူး’ လို့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်း ကပြောပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မစ္စတာ ရှောင်တာနယ် အပါအဝင် စီမံ/ဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီးဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ ဒုဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်တို့ကိုပါ တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ စွဲဆိုထားတဲ့ဒီအမှုကို နေပြည်တော်ကိုရုံးပြောင်းစစ်ဖို့ အမိန့်ကျပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ၄ မှုကတော့ အဂတိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၅၅ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားတာပါ။
ဒီပုဒ်မက တစ်မှုကို ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်အထိချနိုင်လို့ ၄ မှုဆို အနှစ် ၆၀ အထိ ထောင်ချနိုင်ပါတယ်။ (ဒါက တမှုချင်းအလိုက် ပြစ်ဒဏ်ကိုတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီး ဥပဒေအကြောင်းချင်းရာအရ တပေါင်းတည်းကျခံစေတဲ့သဘောသဘာဝလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။)
ဒီအဂတိ ၄ မှုထဲမှာ ပထမအမှုကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဆီက တံစိုး လက်ဆောင်အဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သိန်းနဲ့ အကယ်ဒမီအခေါက်ရွှေ (၇) ပိဿာ ကို သုံးကြိမ်ခွဲယူတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါ။
နောက် ၃ မှုကတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း(ရုံးချုပ်) ဖွင့်လှစ်ဖို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်က မြေနဲ့အဆောက်အအုံကို ထိုက်သင့်တဲ့တန်ဖိုးထက် လျော့တဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ငှားခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဒီငှားရမ်းမှုအပေါ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးအစီရင်ခံစာပါ တွက်ချက်မှုအရ နိုင်ငံတော်က ငွေကျပ်သန်း (၅၂၀၀)ကျော် နစ်နာဆုံးရှုံး ခဲ့တယ်လို့ စွဲချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်တစ်မှုကတော့ နေပြည်တော်မှာပါ။ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် လရောင်တော စိုက်ပျိုး သက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်းစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မြေလျှောက်ထားတဲ့အမှုပါ။
ဒီလျှောက်ထားမှုဟာ ရာထူး အရှိန်အဝါကို သုံးပြီး ထိုက်သင့်တဲ့တန်ဖိုးထက် များစွာလျော့နည်းပြီး ပေးချေတယ်လို့စွပ်စွဲပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ ကြားဖြတ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံတော်က ငွေကျပ် ၁၉ ဘီလီယံကျော် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဒီလရောင်တော အမှုမှာ နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာ မျိုးအောင်၊ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဦးရဲမင်းဦးနဲ့ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဝင် ဦးမင်းသူတို့လည်း အမှုဖွင့်ခံထားရပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးစွဲတဲ့နောက်ဆုံးတစ်မှုကတော့ ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူထားတဲ့ အများပြည်သူ အလှူငွေထဲကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေဖို့ အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါ။
ငွေကျပ် ၁ ဒဿမ ၆ ဘီလီယံကျော်ကို မလျော်ဩဇာ အသုံးပြုပြီးသုံးစွဲ ဆောက်လုပ် စေခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူပိုင်ဆိုင်သမျှကို ဖောင်ဒေးရှင်းထဲ လှူထားတာ။ ပြီးတော့ ဖောင်ဒေးရှင်းက နိုင်ငံတော်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး" လို့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။
အဂတိ အမှုတွေကို လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှာ ခြံနံပါတ် (၁) သီးသန့်တရားရုံးမှာပဲ ပေါင်းစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နအဖ အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေခဲ့ရပေမယ့်လို့ အခုလိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေနဲ့ တရားစွဲခံရတာမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဦးသန်း‌ရွှေလက်ထက်က ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာနဲ့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတာ ဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိပါသလဲ။
ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
"အဲ့ဒီတုန်းက ထိန်းသိမ်းတာ။ အမှုမရှိဘူး။ ဒီလူကတော့ အပြင်မှာထားလို့မသင့်တော်ဘူးဆိုပြီး နှစ်တွေတိုးပြီး ထိန်းသိမ်းသွားတာ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးကျမှ ယက်တော အမှုဖြစ်တာ"
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေနဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကို တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကနေ အဖြေရှာဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက တွန်းအားပေးနေပါတယ်။
လူထုထောက်ခံမှုတခဲနက်ရထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖြေတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်း သူတို့က ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မကြာသေးခင်က နေပြည်တော်လာသွားတဲ့ တရုတ်အထူးသံတမန် ဆွန်ကော်ရှန်း ရက်ရှည်နေသွားရတဲ့အကြောင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့အရေး ကြိုးစားမှုတစ်ခု လို့ အကဲခတ်တွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
တရုတ်အထူးသံ ဆွန်းကော်ရှန်းရဲ့ သီတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာ နေပြည်တော် ခရီးစဉ်
ဒါ့အပြင် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာပြည်ထဲမဝင်နိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ စစ်ကောင်စီက အာမ မခံလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ တပြိုင်တည်းမှာပဲ အမျိုးသားဒီမိုက‌ရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းထားပြီး ပါတီကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေတယ်လို့ ပြည်တွင်းကအကဲခတ်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဒါဟာ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါတဲ့ နိုင်ငံရေးကို သွားနေတာလို့ သူတို့က သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက ရုံးချိန်းတွေပြန်စစချင်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အမှုတစ်မှုထပ်တိုးလိုက်ပြန်တာက ဒီသုံးသပ်ချက်တွေကို အားကောင်းစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သူအပြစ်မရှိကြောင်းကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်း- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရှည်လျားတဲ့တရားခွင်